प्रहरी र व्यवसायी सेटिङ : चर्को भाडामा बिना पास रातिराति काठमाडौँबाट यात्रु ओसार्दै ? – Namaste Dainik
June 8, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on प्रहरी र व्यवसायी सेटिङ : चर्को भाडामा बिना पास रातिराति काठमाडौँबाट यात्रु ओसार्दै ?
बिश्व अहिले कोरोनासंग जुधिरहेको छ भने धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ । हाम्रो देश नेपाल पनि अहिले यो भाइरससंग लडिरहेको छ । ७५ दिनदेखि रहेको लकडाउनले जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । तर यो लकडाउन केहि मुठ्ठीभर मानिसहरुको लागि भने ब्रमलुट मच्चाउने राम्रो अवसर पनि बनेको छ । अहिले लकडाउनको मौका छोपी केहि व्यवसायीले राम्रै कमाउने अवसर समेत पाएका छन् । बिगत दुई सातायता राजधानीबाट रातको समयमा दर्जनौं गाडी यात्रु बोकेर उपत्यका बाहिरिने गरेका छन् । उनीहरुलाई न त पास चाहिन्छ न त लकडाउनको पालना नै गर्नुपर्ने हुन्छ,केवल प्रहरीसंग गरिएको सेटिंङ नै काफी छ ।
लकडाउनको मौका छोपी सवारी साधन चलाएर यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा नै चर्को भाडा असुल्दै कलंकी र कोटेश्वर नाकाबाट सयौं यात्रुलाई राजधानी बाहिर पठाउने गरिएको ट्राफिक प्रहरी श्रोतले बताएको छ । यतिबेला यो धन्दामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केहि पदाधिकारी र केहि पुर्व पदाधिकारी लागेको आरोप पनि छ । लकडाउनको मौकामा रातिराति चर्को भाडा असुलेर यात्रुहरुलाई बाहिर पठाउने गरेको पाइएको छ । राजधानीबाट यतिबेला उपत्यका बाहिर जान ट्राफिक प्रहरीसंग राम्रै सहयोग मिलेको श्रोत बताउछ । श्रोतका अनुसार यसरी यात्रु पठाउँदा न पास चाहिन्छ न सवारी साधनमा स्वास्थय सावधानी नै अपनाउनुपर्छ । असुरक्षित र पास बिनाकै भएपनि ती सवारी निर्वाध रुपमा काठमाण्डौदेखि बिर्तामोड,काकरभिट्टा,बिरगंजसहित देशका बिभिन्न गन्तव्यसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
उनीहरुलाई कहिँ चेकिङ गरिदैन र उनीहरु चर्को रकम असुलेर यात्रुलाई बाहिर पठाउने र केहीलाई राजधानीमा समेत ल्याउने धन्दामा सक्रिय रहेको श्रोत बताउछ । अर्थ डेलीसंग श्रोतले भन्यो–यो धन्दामा केही उच्च ट्राफिक अधिकारी नै संलग्न छन् । यो बिषयमा सोध्दा ड्युटीमा खटिएका एक ट्राफिक प्रहरीले भने–हाम्रो काम त ड्युटी गर्ने हो तर माथिको आदेश भएपछि ति सवारी रोकतोक गर्न सक्ने कुरा नै भएन । अहिले गाडीहरु राती बाक्लै संख्यामा बाहिरिएको देख्दा लाग्छ लकडाउन खुलिसकेको छ । अहिले देशभर यातायात ठप्प रहेको अवस्थामा यात्रुको समस्यामा सहयोगी बन्नुपर्ने प्रहरी उल्टै कमाउ धन्दामा लाग्दा कोरोना नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने खतरा बढेको छ भने कालोबजारी मौलाएको छ । यस बिषयमा अर्थ डेलीले सम्पर्क गर्दा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले आफुलाई यो बिषयमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने जनप्रतिनिधिहरुले अलपत्र परेका आ-आफ्ना जिल्लाबासीहरु लिएर गएको तर ट्राफिक कै संलग्नतामा यात्रु पठाउने काम भइरहेको बारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको पुनः दोहोर्याए ।
तर पैसा असुलेर मान्छेलाई बाहिर पठाइएको कुरा हल्ला मात्रै हो मलाइ यस बिषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन। स्थानीय तहकै पत्रका आधारमा चलाइएको गाडीले समेत चर्को भाडा लिने गरेको गुनासो डीआईजी विश्वराज पोखरेलसम्म गुनासो पुगेको श्रोतले बतायो ।यसबारे पोखरेलले ट्राफिक प्रहरी प्रमुख ढकालसंग छलफल गर्ने बताएको श्रोतले बतायो । अहिले कलंकीबाट भन्दा पनि कोटेश्वर नाकाबाट धेरै सवारी साधनलाई विपी राजमार्ग हुँदै तराई पठाउने गरिएको जानकारी अर्थ डेलीलाई प्राप्त भएको छ । यसरी मिलेमतोमा सवारीसाधनलाई बाहिर पठाउँदा सम्बन्धित निकाय बेखबर हुनु आश्चर्यजनक छ भने यसले कोरोना नियन्त्रणमा समेत थप चुनौती थपेको छ।
अर्जुन कपुर कि प्रेमिका मलाइका लाई पनि कोरोना संक्रमण !
जापानमा कोरोना बाट १२ जना को मिर्त्यु, बिहिबार मात्रै ५७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ।